Lowe Rafferty - guy egqamile futhi ekhangayo owanqoba izinhliziyo ezinkulungwane amantombazane. Ungathanda ukujwayelana nini yomlando wakhe? Funda indlela ukuhlela ukuphila kwakhe siqu le nsizwa? Siyajabula ukunikeza ulwazi oludingekayo.
Lowe Rafferty wazalwa Okthoba 6, 1996 e-London. Uyise akudingi isingeniso. Kuyinto eziyintandokazi kubantu abaningi abahlala umlingisi Dzhud Lou. Uyayazi kubabukeli kusukela ifilimu "The Aviator" (2004) kanye "Sherlock Holmes" (2009). Umama iqhawe lethu, Sadie Frost, futhi actress okhokhelwayo.
Ngo-2000, umndeni ubulokhu amanye. Ngezinye uJude nendodakazi Sadie wazalwa, okwakubizwa ngokuthi i-Iris. Ngo-2002 yena wazalwa eyesithathu ingane yabo evamile - indodana Rudy Indian Otis. Ngeshwa, abantwana abakwazi ukusindisa umshado ekubhujisweni. Ngo-2003, umbhangqwana uhlukana.
Ngezinye Lowe Rafferty futhi babe nodadewenu bokutholwa. Omunye wabo (Sofia) imodeli Samantha Burke wabeletha, futhi ongumama wamantombazane amabili (Ada) kuyinto umculi Katherine neHarding.
Ukubheka izithombe eyizibulo Dzhuda Lou, singasho into eyodwa: ukubukeka kwakhe ezikhexisayo. Okude, umzimba mancane futhi ubuso kuhle - konke lokhu kuye kwenza ukuba umfana ube imodeli.
Ngo-2014, Rafferty Lowe seziqalile ukusetshenziswa wakhe kwi show DKNY. Yena ngokuqiniseka ume phezu yesikhulumi. Zonke izingubo babehlezi, ngulowo lalowo-ke nje ephelele. Ngemva kwesikhashana le nsizwa "zikhanyise" on the show Dolce & Gabbana.
Ngo-2015, enye yezindawo ezinkulu kakhulu imodeli ejensi UK aphakanyisiwe Rafferty isivumelwano letihlomulisa. Futhi hero yethu wayengeke aliyeke leli thuba elihle kangaka. Uvele usezibophezele adubula British Vogue, kanye lukbuka Effra London. Muva nje, eyizibulo Hollywood umlingisi ubuso izembatho brand Tiger yaseSweden.
nezinye izinto zokuzilibazisa
Lowe Rafferty kuthatha isikhathi hhayi kuphela ukubamba iqhaza fashion imibukiso nesithombe amahlumela. Sekuyisikhathi eside wayengowasebukhosini nesithakazelo umculo. Okusanda umfana usethe iqembu lakhe siqu, okuyinto uba i guitarist kagesi.
Futhi, le nsizwa ithola kwayena football fan kweqiniso. Izintandokazi Club Rafferty Lowe futhi uyise "Tottenham" (UK).
Okokuqala thanda hero wethu saba nendodakazi umdlali webhola lombhoxo edumile Lawrence Dellagi. Ella won Man ubuhle bayo kanye intelligence okusezingeni eliphezulu. Nokho, le noveli akuzange kuhlale isikhathi eside.
Ingabe namuhla khulula inhliziyo umculi oneminyaka engu-20 ubudala? Mhlawumbe, sizoba ukudumaza abalandeli bakhe. Ngempela, ngo-May 2016 waqala ukuvela emaphathini e inkampani ye ubuhle entsha. Igama lakhe Molly Mura'ash. Impela ungudadewethu, indodakazi ka umculi we band British Oasis.
Thina libike ukuthi yakha umsebenzi wakhe futhi nempilo yakho Rafferty Lowe. Ubudala nokuzilibazisa Man manje obaziyo. Simfisela omfundisayo impumelelo ngenkathi umculo ukumodeliswa Amasimu!
Khetha izingane ezinhle zokugqoka kahle
Sidlula isikhathi: imoto esheshayo emhlabeni